बागलुङ । बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा समस्या बढेपछि यहाँका रेष्टुराँ र शो–रुमका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ ।होन्डा नेपालको शो–रुमले सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क शौचालय सेवा सुरु गरेको केही
कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका–२ भाँसीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ट्र्याक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा आज एक मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । से२प ५६५८ नंको मोटरसाइकललाई से१त ९६६८ नंको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइल
पृथ्वीराजमार्गको आँबुखैरेनी खण्ड बेलुका ७ बजेबाट बन्द
दमौली । पृथ्वीराजमार्ग अन्तरगत तनहुँको आँबुखैरेनी–मुग्लिन खण्ड आज बेलुका ७ बजेदेखि बन्द गरिने भएको छ । आँबुखैरेनी–४ पावर हाउस नजिक बिहान सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको उक्त सडकखण्ड मर्मतका लागि बेलुका
प्रचण्डलाई हैसियतमा रहेर बोल्न ओलीको सुझाव
विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हैसियतमा रहेर बोल्न सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार एमाले विराटनगरले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन
पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला अदालतमा गोली चल्यो
पश्चिम नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला अदालत परिसरमा गोली चलेको छ । प्रहरीका अनुसार सोमबार सरावल गाउँपालिका–४ का हर्षराम यादवले आफ्नी काकी रोशनी यादवलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार गरेका हुन्
सप्तरी । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा करेण्ट लागेर एक महिलाको आज मृत्यु भएको छ । शम्भुनाथ नगरपालिका–४ कठौनामा करेन्ट लागेर स्थानीय ३० वर्षीया नजिरा खातुनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट फर्किनेमा कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेको छ । यहाँ थप एक जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखापरेको हो । शुक्रबार २१६ जनामा परीक्षण गर्दा एक जनामा सङ्क्रमण पुष्टि
दलित प्रमाणित पत्र रद्द भ‌एसँगै उम्मेदवारी पनि खारेज
अनमोल कार्की रौतहट । इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरले मुस्लिम समुदायका एक व्यक्तिको दलित प्रमाणित पत्र रद्द गरिदिएसँगै उम्मेदवारी खारेज भएको छ । गैरदलित रहेको भन्दै उजुरी परेको आधारमा स्थानीय तह
मोरङ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जनताको चाहनाअनुसारको बजेट ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट
हिमपहिरोमा परी एक महिलाको मृत्यु
बझाङ । यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा हिमपहिरोमा परी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सुर्मा गाउँपालिका–१ नाउलाकी करिब ३० वर्षीया सिन्की बोहरा रहेको बताइएको छ । बिहीबार राति करिब
सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाक
राजविराज । सप्तरीको खडक नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख जयप्रकाश चौधरी थारुले नगरभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाक प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । आज पदभार ग्रहणपछि उनले पहिलो निर्णय गर्दै सामुदायिक
गण्डकी । पोखराबाट जोमसोम उडानका क्रममा हराइरहेको तारा एयरको जहाज खोज्नका लागि पोखराबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ । पोखरा विमानस्थलबाट हेलिकप्टरमा नेपाली सेनाका जर्नेल बाबुराम श्रेष्ठ नेतृत्वको
मुग्लिन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ तोपेखोलामा गुडिरहेको माइक्रोबस र जिपमाथि पहिरो खसेको छ । मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ गइरहेको ग१ख ९९०९ नंको यात्रुवाहक माइक्रोबस र प्रदेश३–०१–०२३च ०५३५ नंको कारमाथि करिब
सुक्खा पहिराले नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पहिराले अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ नाम्दीखोला नजिकै आज साँझ ५ः३० बजेको समयमा सुक्खा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार
रोल्पामा विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले उपभोक्ता मर्कामा
एल. बि. मगर रोल्पा । पछिल्लो समय रोल्पामा जिल्ला विद्युत प्राधिकरण रोल्पाको चरम लापरवाही बढन थालेसँगै उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्नुका साथै उचित र भरपर्दो विद्युत सेवा पाउन सकेका छैनन् । जिल्लाका